Unyi Mmanụ, Grịl gas, Onye na-emepụta Electric Grills | Wellness
Anyị na-enye nke unyi grills, gas grills, electric grills usoro arụmọrụ.
Nye Ngwọta Dum
Wellsure na-elekwasị anya na ngwọta niile na-enye kama ị na-arụpụta ọrụ nke na-agwakọta imewe, mmepụta, ahịa na ọrụ nkwụsị.
Anyị Unyi grịl, Gas grills, Electric grịl Products
Gịnị na-eme ndị ahịa anyị obi ụtọ.
WST - 019 pizza oven. Ngwaahịa a bụ nke kachasị mma ma nwee arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya na asọmpi asọmpi.
WST-005. Iji kwe nkwa ịdị mma nke, ndị na-eweta ngwaahịa ya agbanweela nyocha siri ike ma naanị ndị na-eweta ngwaahịa ndị na-ezute ụkpụrụ mba ụwa ka ahọrọ dị ka ndị mmekọ dị ogologo oge.
Wst-021 abụọ burner gas oven / n'èzí usoro kichin usoro melite
Wst-021 abụọ burner gas oven / n'èzí usoro kichin usoro melite. A na-ere ngwaahịa a n'ọtụtụ mba na mpaghara.
HS-20200811 / Wst-021 na-eme ka ọkụ gas na-ere ọkụ
HS-20200811 / Wst-021 na-eme ka ọkụ gas na-ere ọkụ. Ngwaahịa ahụ nwere ogo dị elu. A ga - eji teepu tụọ nọmba ọnụ ọnụ maka anụ ọhịa ọ bụla ma ọ dịkarịa ala abụọ iberibe kwa ụdị iji hụ na ọ dị mma.
Nye ọrụ ahaziri iche.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ngwaahịa dị njikere maka ọrụ ahụ, ka Wellsure's ọkachamara icheku ọkụ, gas grills, ọrụ mmezi ọkụ eletrik na-enyere gị aka inweta ngwaahịa dị mma n'ime ụbọchị 7 na-enweghị oge ịchụ n'ahịa ma ọ bụ uru mgbakwunye.
Na oru oma ikike na ahụmahụ, anyị nwere ike inye OEM / ODM nhazi dị ka ahịa 'echiche ma ọ bụ nsụgharị. Anyị nwekwara nkà management na rue ISO9001, OA, CSA akwụkwọ, n'ihi ya, anyị nwere obi ike na-enye anyị ahịa na nke kacha mma na ngwaahịa na adabara ngwọta. Anyị na-anabata ndị ahịa ọ bụla n'akụkụ ụwa niile.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ngwaahịa dị njikere maka ọrụ ahụ, ka anyị nye ọrụ ọrụ ahaziri iche iji nyere gị aka inweta ngwaahịa dị mma n'ime ụbọchị 7.
Onye ahịa ahụ gwara ya ụdị ihe achọrọ, nkọwapụta arụmọrụ, usoro ndụ na nnabata chọrọ.
The imewe otu abuana si mmalite nke a oru ngo iji hụ na ahaziri imewe ngwaahịa bụ ihe kasị mma maka ndị ahịa mkpa.
Iji nye a elu àgwà Ọdịdị, anyị ịnọgide na-enwe irè àgwà management usoro.
Ozugbo a kwadoro ihe ngosi ahụ na ụdị, ọrụ, na ihe achọrọ, mmepụta bụ ọkwa ọzọ.
Ngwaahịa anyị enweela ọtụtụ asambodo na Usoro Ogo na Innovation.
Zhongshan Wellsure Metal Products Co., Ltd. guzosiri ike na 2003, anyị bụ ọkachamara na ngwaahịa aluminom, arịa ụlọ n'èzí, ihe ọkụkụ unyi, gas gas, gas gas, kichin n'èzí, ire ọkụ ọkụ, steak na ndị na-eme pizza, ọkụ ọkụ ọkụ, olulu ọkụ, anwụrụ ọkụ, kamado na ngwaọrụ BBQ wdg. .
Factorylọ ọrụ Wellsure na-ekpuchi ebe ihe dịka square mita 63333. Anyị nwere zuru nso nke elu mmepụta ụlọ ọrụ na ule akụrụngwa, gụnyere a ogbako na ọnwụ, zọ, ekwe, pickling, ịgbado ọkụ, elu ọgwụgwọ na nzukọ ike. Anyị nwere otu injinia nke nwere ihe karịrị afọ 10 iji zute ihe dị iche iche ndị ahịa chọrọ. Anyị na-elekwasị anya na ngwọta niile na-enye ọ bụghị naanị n'ichepụta ma jikọta imewe, mmepụta, ahịa na ọrụ nkwụsị.
Na oru oma ikike na ahụmahụ, anyị nwere ike inye OEM / ODM nhazi dị ka ahịa 'echiche ma ọ bụ osise. Anyị nwekwara nkà management na rue ISO9001, OA, CSA akwụkwọ, otú anyị nwere obi ike na anyị nwere ike inye ndị ahịa anyị na ezi ngwaahịa na adabara ngwọta.
Anyị unyi grills, gas grills, electric grills ngwaahịa na-tumadi exported na United States, Australia, Europe na South Africa. Anyị na-anabata ndị ahịa ọ bụla n'akụkụ ụwa niile.
N'ime afọ 17 'ahụmahụ engineer otu.
A Pụrụ abletụkwasị Obi Quality Izute Ndị Ahịa Anyị.
WST-011 Infrared Oven
WST-011 Invenred Oven
Nweta Aka Na Anyị